သင်ဒီမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်,သင်ဖြစ်ကောင်းဟရာမ်၏ယုတ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာအစွမ်းထက်စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဒါပေမယ့်ဒီမျက်တောင်ခတ်ဖို့အသစ်ဖွင့်သောဖြစ်ရပ်အတွက်,ငါ့ကိုသငျသညျဤမြေတပြင်လုံးနယ်ပယ်အကြောင်းကိုသည်အဘယ်သို့အတွက်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုသင်တန်းပေးပါရစေ။ မူလကဖူကူရွီးမားသည္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိဟြာေ၀းကိုဆိုလိုေသာ္လည္းအဓိပၸာယ္မွာဟြာေ၀းတြင္အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ကျွန်တော်တို့ဟာသူမရဲ့ဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်တဲ့ဂိမ်းတွေနဲ့လာပေမယ့်ဒီစုဆောင်းမှုမှာဂိမ်းအများစုဟာတကယ့်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ဖေ့ဘုတ်မှာရေပန်းစားနေတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျားဘညိမ်းစိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ပါတယ်။, အခြေခံအားဖြင့်၊ဤကျားမရေးရာစိတ်ကူးယဉ်သည်လူကြိုက်များသောကာတွန်းနှင့်ဂေါ်ရီလာစီးရီးများမှဇာတ်ကောင်များ၏ပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါယောက်ျားလေးများအန်စာတုံးနှင့်အတူမိန်းကလေးများသို့လှည့်နှင့်မိန်းကလေးများရိုးရှင်းစွာဖြစ်နိုင်သော်လည်းဘယ်တော့မှနည်းလမ်းများ၌သင်တို့ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုရုပ်ပြောင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းအတွက်အန်စာတုံးပေးထားကြသည်။
ဒါဟာဒီဆိုက်ပေါ်တွင်ရုံရုပ်ပြောင်ဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့သည်လည်းဂိမ်းဖန်တီးသူများကရေးသားမူရင်းဇာတ်ကောင်များနှင့်ကြံစည်မှုလိုင်းများနှင့်အတူလာမယ့်အများအပြားမူရင်းဟန်းနီးမွန်းဂိမ်းနှင့်အတူလာကြ၏။ ကျနော်တို့ဂျပန်ကနေကျော်ဆောင်ခဲ့သောများစွာသောလိင်ဂိမ်းရှိသည်နှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဘာသာပြန်ထားသော,ဒါကြောင့်သင်ပျော်မွေ့ရသူကိုပထမဦးဆုံးကစားသမားများအကြားဖြစ်လိမ့်မယ်။, ဒီစုဆောင်းမှုသာအိုင်တီဂိမ်းတွေနဲ့လာမယ့်ဖြစ်ပါသည်,သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံရှိသည်လိမ့်မယ်ဆိုလိုတာက,ထိပ်တန်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဂရပ်ဖစ်နှင့်ပြည့်စုံ,လိင်အရေးယူနှင့်စိတ်ကြိုက်ကျော်လွတ်လပ်ခွင့်အများကြီး,သင်အသုံးပြုစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်လိင်ဂိမ်းကစားပျော်မွေ့ပါစေလိမ့်မည်ဟုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းလိုက်ဖက်မှုနှင့်အတူ. ဒါကြောင့်ဒီစုဆောင်းမှုနှင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏အင်္ဂါရပ်များမှကြွလာသောအခါအကြောင်းပြောဆိုရန်ဤမျှလောက်ရှိပါတယ်။ ေအာက္ပါအပိုဒ္တြင္ဤသို႔ေဖာ္ျပပါမည္။
ကျနော်တို့ရှမ်းညစ်ညမ်းများ၏လူကြိုက်များမြင့်တက်အပေါ်ကြောင်းကိုသိလျက်ဤဆိုဒ်ကိုဖန်တီးကျနော်တို့သာစတင်နေ့စွဲဖို့စိတ်ကူးတယ်ယခုအချိန်တွင်အကြားတစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဝဘ်အပေါ်အကူးအပြောင်းများအတွက်အသွားအလာနီးပါးနှစ်ဆတိုးခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လုံးဝအခမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်မှဝင်ရောက်ခွင့်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာဂိမ္းေတြကိုစုစည္းၿပီးတခ်ိဳ႕ကိုဘာသာျပန္ဖို႔ေတာင္အေတာ္လုပ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်တစ်ဦးလစာတံတိုင်းချထား,ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီမှာနှင့်ရှိရုံအချို့နဖူးစည်းစာတမ်းတွေနှင့်အတူပိုပြီးငွေရှာဤမျှလောက်အသွားအလာရ., အခ်ိဳ႕ေသာမဆင္မျခင္ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္မေကာင္းေသာအရာမ်ားမဟုတ္ေသာ္လည္း၊မည္သည့္အခါမွ်မဆင္မျခင္ေၾကာ္ျငာမ်ားထြက္ေပၚလာတတ္သည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။
ထိုအကြှနျုပျတို့အားလုံးသင့်ရဲ့အချက်ပြစိတ်ကူးယဉ်များအတွက်ဂိမ်းများရှိသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကသငျသညျလိုခငျြသို့သော်သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူကိုပုဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါလိမ့်မည်ဆိုလိုတာက,လိင်ခကျြဂိမ်းနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ အဆိုပါရုပ်ပြောင်ဂိမ်းခေတ်ရေစီးကြောင်းစီးရီးကနေသူငယ်၏အမျိုးမျိုးအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင်သင့်လုပ်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့လာမယ့်နေချိန်မှာမူရင်းဂိမ်းများတွင်သာဂျပန်အတွက်လူကြိုက်များဖြစ်ကြောင်းအပြောင်လူသိများသူတွေကိုမှသင်၏ဖူဆယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ရလိမ့်မယ်။
ငါတို့သည်လည်းသင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်မျိုးစုံဇာတ်ကောင်ရထားတဲ့အတွက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးဂိမ်းများနှင့်ကြံစည်မှုလိုင်းရှိသည်။ ဤရွေ့ကားကြွက်လိင်ဂိမ်းများကိုတညဉ့်လုံးကစားသငျသညျစောငျ့ရှောကျနှငျ့သငျအဆုံးကိုရောက်ရှိသည်အထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစွန်းပါလိမ့်မယ်။ ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အလယ္မွာရွိေနစဥ္မွာေတာင္သင္ကစားခ်င္ေနမွာပါလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒီဆိုက်ပေါ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဤမျှလောက်ပိုပြီးရှိပါတယ်။ သင်တို့အဘို့အဆုံးစွန်အစွမ်းထက်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အန်းဒရွိုက်ကိရိယာများကိုသုံးပါ။ သင်ရှာတွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကစားခလုတ်ကိုထိပြီးသင်၏ဘရောက်ဇာတွင်တိုက်ရိုက်အကန့်အသတ်မရှိလိင်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုခံစားပါ။
ကျနော်တို့ဝင်ရောက်ဖို့အခမဲ့မယ့်ဆိုက်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်,ငါတို့သည်သင်တို့၏ဒေတာပြီးနောက်နေထင်စေခြင်းငှါ,. ဒါေၾကာင့္ဂိမ္းမကစားခင္သင့္ရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ေတြကိုေပးဖို႔မလိုဘူးလို႔ေျပာပါရေစ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးကျနော်တို့အဆုံးစာဝှက်စနစ်မှအဆုံးကိုဆက်ကပ်။ ဒါကြောင့်,သင်စိတ်ပူစရာဘာမှရှိသည်. ရုံသငျသညျရှိစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာမှကစားခြင်းကိုစတင်ပါ။ ကွန်ပျူတာ၊စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းများသည်သင်၏ဘရောက်ဇာတွင်အလုပ်လုပ်သည်။